१ fool ग्राफिक डिजाइनहरू ग्राफिक डिजाइनरहरूको लागि उपहार! | क्रिएटिव अनलाइन
के तपाई एक सहकर्मीलाई उपहार दिने सोच हुनुहुन्छ? के तपाईं यस क्रिसमसमा आफैलाई समावेश गर्न चाहनुहुन्छ? यदि हो भने, आज म तपाईंलाई १ you धेरै चाखलाग्दो विकल्पहरू लिएर आउँदछ जसले तपाईंलाई निर्णय लिन मद्दत गर्दछ। म ती अधिक उपयोगी र व्यावहारिक उपहारहरूको लागि छनौट गर्न सिफारिस गर्दछु, व्यक्तिगत रूपमा मलाई लाग्छ कि एक कार्य उपकरण वा हाम्रो कामलाई सजिलो बनाउने केहि चीज सजीलो चीज भन्दा धेरै सराहना गरिन्छ।
यो तपाईं मा निर्भर गर्दछ, डिजाइनरको व्यक्तित्व र तपाईंसँग बजेट। त्यसैले मैले बिभिन्न मुल्यहरुमा र बिभिन्न प्रकार्यहरुका साथ बिभिन्न विचारहरुलाई एकै साथ ल्याउने प्रयास गरेको छु। यी उपहारहरू मध्ये केही कामका उपकरणहरू हुन्, अरूहरू खेल र मनोरन्जनका सामानहरू हुन् तर तिनीहरू सबै तिनीहरू महान छन्!
कम्प्यूटर: यो एक डिजाइनर को लागी स्टार उपहार हो। कामको आवश्यकताहरू र फिल्डमा निर्भर गर्दै जो भन्छन् कि डिजाइनर समर्पित छ, एक कम्प्युटर वा अर्को बढि सिफारिस गरिन्छ। त्यो अवस्थामा, यो महत्वपूर्ण छ कि तपाइँ आफैंलाई प्रत्येक वैकल्पिकले प्रदान गर्ने सुविधाहरूको बारेमा र तपाइँको साथीको आवश्यकताको बारेमा राम्ररी सूचित गर्नुहोस्। उही टोली आवश्यक पर्दैन यदि हामी मोशन ग्राफिक्सको क्षेत्र, चित्रणको क्षेत्र वा वेब डिजाइनको लागि समर्पित छौं।
ग्राफिक ट्याब्लेट: कुनै श doubt्का बिना यो अर्को स्टार उपहार हो र यो हाम्रो सूचीबाट हराउन सक्दैन। यो एक कम्प्युटर अगाडि काम गर्न को लागी एक सबै भन्दा महत्वपूर्ण उपकरण हो। धेरै अवसरहरूमा हामीले सही ग्राफिक्स ट्याब्लेट छनौट गर्न सल्लाह दिएका छौं। यस लेखमा तपाइँले केहि सुझावहरू फेला पार्नुहुनेछ जुन निश्चित रूपमा ट्याब्लेट छनौट गर्न मद्दत गर्दछ जुन तपाइँको आवश्यकता र बजेटमा उत्तम सूट गर्दछ।
झलक: Wacom द्वारा विकसित एक जिज्ञासु र चाखलाग्दो उपकरण जसले हामीलाई हाम्रो स्केचहरू यसको विशेष कलम र यसको क्लैम्प-आकारको सेन्सरको लागि धन्यवाद समात्न मद्दत गर्दछ। के हामी प्राप्त गर्छौं हाम्रो स्केचहरू परम्परागत तरिकामा विकास गर्न जुन हामी तिनीहरूलाई डिजिटल समर्थनमा दर्ता गर्दछौं। निस्सन्देह समय बचत गर्ने र डिजाइनरको काम सजिलो गर्नका लागि।
आईट्याप चार्जर: USB एडाप्टरको साथ बिजुली चार्जर जुन यो अपरेट भएको प्रत्येक पटक उज्यालो हुन्छ। ग्राफिक डिजाइनरहरू प्राय: सबै प्रकारका इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूले घेरेका हुन्छन्, त्यसैले यो उदाहरणले केवल आवश्यकता र केही प्रकार्यहरू मात्र समेट्दैन, तर मौलिक, हड्ताल र प्रेरणादायक तरिकामा पनि गर्दछ।
एयरट्याम: विशेष गरी कसैको लागि जो अडियोभिजुअल क्षेत्रमा काम गर्दछ, यो वस्तु वास्तवमै उपयोगी हुन सक्छ। यो एक HDMI कनेक्टर हो कि कुनै पनि मोनिटर वा कम्प्युटर स्क्रिनको छवि कुनै पनि टेलिभिजन वा प्रोजेक्टरमा केबलहरूको आवश्यकता बिना डुप्लिकेट गर्दछ। महान!
बिग शट: के तपाई कसैलाई चिन्नुहुन्छ जो छवि को दुनिया मा आफ्नो पहिलो कदम चाल्न को लागी गरीरहेको छ? के तपाईको डिजाईन गर्ने साथीको बच्चा छ? त्यसोभए यो क्यामेरा एक चाखलाग्दो उपहार हुन सक्छ किनकि यो एक प्रयोगात्मक र विशेष गरी डोडेक्टिक क्यामेरा हो जसले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई यी ग्यासहरू कसरी काम गर्दछन् भन्ने बारे अझ बढी गहन र व्यावहारिक तरिकामा बुझ्न मद्दत गर्दछ। यो पनि भेला गर्न र यसलाई छुट्ट्याउन को लागी सम्भावना प्रदान गर्दछ ताकि हामी जहिले पनि यसको हरेक तत्वको छविमा परेको प्रभावलाई हामी बुझ्नेछौं।
टाइप राइडर: यो रमाईलो तरीकाले टाइपोग्राफीको अद्भुत क्षेत्र सिक्नको लागि धेरै रोचक र अन्तर्क्रियात्मक भिडियो गेम हो। निस्सन्देह एक मनोरन्जन जसले तपाईंको डिजाइनर साथीहरूलाई धेरै हास्यास्पद बनाउँदछ र ती अवधारणाहरू समीक्षा गर्न र नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
इन्टुओस क्रिएटिवल स्टाइलस: यो ट्याब्लेट र आईप्याडहरूको लागि अविश्वसनीय डिजिटल कलम हो जसले अविश्वसनीय सम्भावनाहरू, क्षमताहरू र सुविधाहरू समावेश गर्दछ। कुनै श doubt्का बिना, स्केचेसको विकास र नयाँ डिजाइनहरूको अवधारणाको लागि अत्यन्त द्रुत, द्रुत र व्यावहारिक उपकरण।
मीटरप्लग: यदि त्यहाँ कुनै कुरा निस्सन्देह छ भने, यो यो हो कि ग्राफिक डिजाइनरले दिनको धेरै घण्टा कम्प्युटरको अगाडि खर्च गर्दछन् र सबै प्रकारका मेशिनहरू र इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू प्रयोग गर्दछन्। यो स्मार्ट प्लगले ऊर्जा खपत कम गर्न अनुमति दिन्छ र यसैले बिजुली बिल: कुनै पनि डिजाइनरको लागि पूर्ण रूपमा सफल उपहार, र कसैको लागि पनि, सबै भनिन्छ। कसले आफ्नो बिजुली बिल बचत गर्न चाहँदैनन्?
लेगोको गुट: रचनात्मकता र डिजाइनको दुनियासँग सम्बन्धित कुनै पनि पुस्तक धेरै राम्ररी प्राप्त भएकोमा निश्चित छ। यहाँ तपाईसंग लेगोको बारेमा यस पुस्तकको उदाहरण छ, कुनै खेलौना जुन कुनै बच्चाले धेरै पुस्ताको ग्राफिक डिजाइनरलाई प्रभावित र साथ दिएको छ।
फन्टस्पॉटिंग: टाइपोग्राफी को क्षेत्र मा प्रशिक्षण एक आदर्श कार्ड खेल। यो खेल पनि कस्टम डेक डिजाइन र भेला गर्न यसको आधिकारिक वेबसाइटबाट डिजाइनहरू डाउनलोड गर्ने संभावना प्रदान गर्दछ। अत्यधिक सिफारिश गरिएको!
इन्कोडी: यो एक शानदार किट हो जसले तपाईंलाई तपाईंको मोबाइल फोनबाट खिचेको फोटो र छविहरूलाई मूल टी-शर्ट र कपडामा रूपान्तरण गर्न अनुमति दिनेछ। साहसी छन् ती सबै रचनात्मक को लागी आदर्श।
पिक्सेलरोलर: जब हामी स्केचहरूमा कार्य गर्दछौं, यो अधिक सम्भावना हुन्छ कि हामी पछि उनीहरूसँग हाम्रो कम्प्युटर र हाम्रो डिजिटल सम्पादन सफ्टवेयर मार्फत काम गर्नेछौं। त्यसोभए यो महान शासक एक आवश्यक उपकरण बन्न सक्दछ किनकि यो पिक्सेलमा क्यालिब्रेट गरिएको छ। यसको साथ हामी हातले वेबपृष्ठहरू र स्क्रीन अनुप्रयोगहरू स्केच गर्न सक्दछौं।
Moleskine Evernote स्मार्ट नोटबुक: यो नोटबुक Evernote र तपाइँको आईप्याड वा आईफोन जस्तै प्रयोग गर्न डिजाइन गरिएको छ। यसमा जानकारीलाई वर्गीकृत गर्न र व्यवस्थित गर्न धेरै चिपकने स्टीकरहरू पनि समावेश छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ग्राफिक डिजाइन » १ fool ग्राफिक डिजाइनहरू ग्राफिक डिजाइनरहरूको लागि उपहार!
मलाई लाग्छ तपाईंले केही अमीगुरुमिस छुटाउनु भयो! तिनीहरू हातले बुनेका पुतली हुन् कि बिभिन्न निजीकृत डिजाइनहरू हुनसक्छन्।
तान्यालाई जवाफ दिनुहोस्